Samsung ရဲ့ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် 2019 ခြေလှမ်း - PX
Samsung နဲ့ Apple ဆိုတာ Smartphone ဈေးကွက်ကို အပြိုင်အဆိုင်ဦးဆောင်နေကြတဲ့ နည်းပညာဘီလူးနှစ်ကောင်လို့ တင်စားမယ်ဆိုရင်လည်း မလွန်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Android OS စတင်တိုးတက်လာပြီး Samsung ကနေ iPhone နဲ့အပြိုင် Galaxy Series ကို ထုတ်လုပ်လာချိန်ကနေစပြီး Apple နဲ့ Samsung ရဲ့ကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ စတင်ခဲ့တယ်ဆိုရမယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ ဒီ Company နှစ်ခုကြား ဈေးကွက်အရရော၊ ဂုဏ်သိက္ခာအရပါ အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုတွေလည်း မပြီးဆုံးနိုင်အောင် ရှိခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲလိုအငြိုးကြီးတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကို iPhone X ကစပြီး OLED Display တွေ အဓိကထောက်ပံ့နေတဲ့သူဟာ Samsung ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာကတော့ နှစ်ဖက်သော Fan တွေကို စဉ်းစားရကြပ်စေတဲ့ကိစ္ခ္စပါ။ ဆိုတော့ကာ Samsung အနေနဲ့ ဘာကြောင့် Apple ကို ကူညီရသလဲ? သေချာတာကတော့ စီးပွားရေးလောကမှာ အကျိုးမရှိပဲ အကြောင်းဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။
– ရန်သူရဲ့ ရန်သူဟာ မိတ်ဆွေပါ
တကယ်တော့ Smartphone Market တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကြည့်ရင် Samsung နဲ့ Apple ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေဆိုပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရပ်တည်မှုနယ်ပယ်ဟာ တကယ်တမ်းမတူညီကြပါဘူး။ ဆိုလိုတာက သူတို့ဟာ မတူညီတဲ့ OS နှစ်ခုအပေါ်မှာ ပရိတ်သတ်ကိုယ်စီနဲ့ ရပ်တည်နေကြတာပါ။ iPhone ဟာ Android Phone တွေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ခံရခံရ သူ့အတွက် Apple ရဲ့ Ecosystem ကိုမှနှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်က အခိုင်အမာရှိနေပြီးသားပါ။
Samsung အတွက်ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ Flagship Level မှာ Huawei လို ပြိုင်ဘက်မျိုး၊ OnePlus, Xiaomi တို့လို Killer တွေ၊ Oppo, Vivo တို့လို Brand တွေက Level အသီးသီး၊ ဈေးကွက်အသီးသီးမှာ အပြိုင်အဆိုင် နေရာလုယူဖို့ ကြိုးစားနေကြသူတွေပါ။ ဒီတော့ Samsung အနေနဲ့ အဓိက အသာရဖို့ကြိုးစားနေရတာက Apple မဟုတ်တဲ့ တခြား Brand တွေကိုသာ ဖြစ်နေပါတယ်။
– စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်တယ်
OLED တွေမသုံးခင်က Apple မှာသုံးခဲ့တဲ့ LCD Display တစ်ခုစီရဲ့ပျမ်းမျှတန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၅၀ ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone X ရဲ့ OLED Display တစ်ခုစီအတွက် Samsung ကို ပေးချေရတဲ့ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဝန်းကျင်အထိရှိပါတယ်။ ဒါတောင် Display တန်ဖိုးပဲရှိသေးတာပါ။ Apple မှာသုံးတဲ့ Flash Storage နဲ့ DRAM Memory Chip တွေကိုလည်း Samsung ကပဲထုတ်လုပ်ပေးထားတာပါ။ (ဒါတောင် အရင်က Apple ရဲ့ A Series Chipset ကို TSMC နဲ့ အတူ Samsung ကလည်း ခွဲဝေထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာ ထည့်မတွက်ထားသေး)
ဒါဆို ဘာကြောင့် Apple အနေနဲ့ Samsung မဟုတ်တဲ့ တခြား Company ကနေ ဝယ်မသုံးလဲ?
အဖြေကတော့ အဲဒီအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို ထုတ်ပေးနိုင်တာက Samsung တစ်ခုထဲပဲ ရှိတာကြောင့်ပါ။ Apple ဟာ iPhone အတွက် လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအများစုကို တရုတ်ပြည်ရဲ့ Supplier တွေဆီကနေ မှာယူနိုင်တာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် OLED Display နဲ့ Memory Chipset အပိုင်းမှာတော့ အဲလိုလုပ်လို့မရပါဘူး။
၂၀၁၇ စာရင်းရှင်းတမ်းအရ Samsung Electronics ရဲ့ လုပ်ငန်းအမြတ်အစွန်းဟာ Korean won 15 Trillion ကျော် ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ Semiconductor နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္ခ္စည်းတွေကနေ ရတဲ့ အမြတ်ငွေက 11 Trillion အထိရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ DRAM Chip ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာ Samsung ဟာ Intel ကို ကျော်တက်ပြီး Market Share ရဲ့ 45% ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ Smartphone Display ဈေးကွက်မှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း OLED Display ရဲ့ 90% လောက်က Samsung က ထုတ်တာပါ။
ဆိုတော့ကာ Smartphone အလုံးရေ သန်းရာနဲ့ချီရောင်းချရတဲ့ Apple အနေနဲ့ သူတို့လိုအပ်တဲ့ Demand ကို အချိန်မှီထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာက Samsung ကလွဲပြီး မရှိပါဘူး။ (ဒါတောင် iPhone X ဟာ iPhone 8 နဲ့ 8 Plus ထက် နောက်ကျပြီးမှ ဈေးကွက်ထဲကို ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်) ဒါကြောင့် ဒီဈေးကွက်တွေမှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ Samsung အနေနဲ့ Monopoly ဖြစ်မသွားအောင် Apple နဲ့ Google တို့က LG ဆီမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသလို Samsung အနေနဲ့လည်း 2018 မှာ ခါတိုင်းလောက် Smartphone တွေဘက် အာရုံမစိုက်နိုင်ခဲ့တာ မဆန်းပါဘူး။
– ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုပြီးသက်သာစေတယ်
အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း Samsung ရဲ့ Semiconductor နဲ့ OLED Display တို့လို Component တွေရောင်းချမှုဟာ ဖုန်းထုတ်လုပ်ရောင်းချတာထက် အမြတ်အစွန်းပိုရစေတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ Component တွေကို သူတို့ကိုယ်ပိုင် Samsung ဖုန်းတွေအတွက်ပဲ သီးသန့်ထုတ်တာမျိုးမလုပ်ပဲ တခြား Smartphone Company တွေကိုပါ ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို သက်သာစေတဲ့အပြင် အမြတ်အစွန်းလဲ ပိုရစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင် ထိတဲ့သဘောပါပဲ။
အပေါ်က အချက်တွေဟာ Samsung အနေနဲ့ ဈေးကွက်အခိုင်အမာရှိနေတဲ့ Apple ကို Component တွေ ကျေကျေနပ်နပ်ရောင်းချစေလောက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေပါပဲ။ ဒါဆို အဲဒီလောက် အဆင်ပြေနေရက်နဲ့ ဘာလို့ဖုန်းမထုတ်တော့ပဲ ကုန်ကြမ်းသက်သက်ရောင်းမနေလဲလို့ တွေးစရာရှိလာပြန်ပါတယ်။ “ဆင်ပိန်ကျွဲလောက်” ဆိုတဲ့အတိုင်း Samsung အနေနဲ့ ၂၀၁၈ Smartphone ဈေးကွက်မှာ ခြေချော်မှုတစ်ချို့ ရှိခဲ့သည့်တိုင် သူ့ရဲ့ Smartphone ဈေးကွက်ဟာ Company ရဲ့ အဓိကဝင်ငွေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Smartphone တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် Samsung အနေနဲ့ သူထုတ်လုပ်တဲ့ Component တွေကိုပါ တစ်ခါတည်းကြော်ငြာရာရောက်တယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဂုဏ် ပါ။ ထိပ်တန်း Smartphone ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် လူသိများခြင်းဟာလည်း Corporate တစ်ခုလုံးရဲ့ Image ကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ သတင်းတွေအရ Samsung ဟာ 2018 က အမှားတွေကိုပြင်ဆင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Product, Strategy တွေနဲ့အတူ 2019 ကို ပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေတာ အားလုံးအသိဖြစ်မှာပါ။ ခုလိုအားထုတ်မှုကနေ ရလာမယ့် အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းဟာ Samsung ရဲ့အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏတာအိပ်မောကျခဲ့တဲ့ နည်းပညာဘီလူးတစ်ကောင်ရဲ့ ပြန်လည်နိုးထမှုနဲ့အတူ 2019 Flagship Smartphone တွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဟာလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာဖို့ ရှိနေပါတော့တယ်။
Galaxy Earbuds ကို Reverse Wireless Charging နဲ့ အားသွင်းနိုင်မယ့် Samsung